भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा भेटियो – Sanjal Nepal
Homeसमाचारभगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा भेटियो
November 13, 2020 admin समाचार 6817
काठमाडौं । स्वर्ण कछुवालाई नेपालमा हिन्दु धर्म मान्नेहरुले भगवान विष्णुको रुपमा मान्छन् । भगवान विष्णुको अवतारहरु मध्य एउटा कछुवाको अवतार पनि भएको धार्मीक मान्यता छ । त्यो कछुवा स्वर्ण कछुवा हो । भगवान विष्णुको अवतारका रुपमा पूजा गरिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा फेला परेको छ। विश्वमै निकै दुर्लभ मानिने स्वर्ण कछुवा नेपालमा फेला परेको हो ।
कार्तिक २८ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईको दिन? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !
धिक्कार छ यि आमालाई ! घरैमा केटा ल्याएर ८ बर्षकी छोरी आमा बसेको कोठामा जान खोज्दा आउँन दिन्थिनन् (भिडियो)
January 3, 2021 admin समाचार 1147
सुस्मा नाम गरेकी एक महिला जो डण्डामा बस्दै आएकी थिईन् । उनी विबाहीत हुनुका साथै एउटी छोरीको आमा पनि हुन् । सुस्माको ८ वर्षकी छोरी पनि छन् । एउटी बच्चाकी आमा उनी छिमेकीलाई केही दिन
६७ वर्षका ‘भजन सम्राट’ अनूप जलोटाले गरे ३० वर्षीया मोडल जसलीनसँग विवाह ? फोटो भाइरल
February 8, 2021 admin समाचार 1263
एजेन्सी / भारतमा भजन सम्राट भनिने अनुप जलोटा र मोडल–नायिका जसलीन मथारुका केही तस्बिर सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेका छन् । यी तस्बिरमा अनुप शेरवानीमा सजिएका छन् भने जसलीन मथारु पनि दुलहीको रुपमा सजिएकी छिन् ।
December 2, 2020 admin समाचार 4643
काठमाण्डौ, नारायण रायमाझी लोक संगीतमा मात्र नभई नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री लगायत समग्र कला क्षेत्रमा निकै चर्चित र स्थापित नाम हो । २०४५/४६ सालतिर बाट व्यवसायिक रुपमा गित गाउँन थालेका रायमाझीका प्राय गितहरु जनजिब्रोमा झु, ण्डिएका
LEX 18 agenda conversation: Job club (541145)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (511669)
dole traces grow as seasonal jobs dry up (131047)